Ny Appliances, no mandroba ry jamba, Manohitra! - News Fitsipika
Ny Appliances, no mandroba ry jamba, Manohitra!
Izy mipetraka ao mandrakariva mijery tsy manan-tsiny, toy ny hoe na inona na inona ny karazana mitranga. Nefa raha tsy ianao mijery, ary na dia rehefa ianao, ny fitaovana, no mandroba anao jamba. Fotsiny izy ireo manao izany amin'ny fomba izay dia sarotra ny mamantatra, fa tsy manao fahadisoana, ny fitaovana rehetra meloka. Avy amin'ny vata fampangatsiahana ny microwave, ny zava-drehetra izay mijanona dia bilking plugged amin'ny vola avy amin'ny banky amin'ny alalan'ny utility ny volavolan-dalàna.
Fa ireo kosa dia lanin'ny kisoa ny angovo manao mihoatra noho ny aminareo nihazakazaka utility volavolan-dalàna. Izy ireo miaraka manao be dia be ny loza ho amin'ny planeta. Kely ny angovo fako ao an-tranonao mba tsy hanao izany fahasamihafana be ho anao. Fa maro ny fandaniam-poana ny am-polony tapitrisa, ary afaka manana fiantraikany loza tao amin'ny faritra nomena.
Amin'ny 2012, California nakatona ny roa-taona fandaharana izay fitaovana tsy mahomby Nosoloana, ny ankamaroany rano heaters sy hihena rafitra. eo ho eo 178,000 fianakaviana nandray anjara. Fandaharana toy izany ihany ny voalohany. amin'ny farany, izany midina ny olona prioritizing angovo fahombiazana rehefa appliance fividianana.
Mpanjifa amin'ny ankapobeny atosiky ny vola. Hatao ny volavolan-dalàna eo ambany fanaraha-maso azo resahana amin'ny mpifanandrina telo:
Get kokoa fifaninanana saran'ny Asa vaventy
Hividianana fitaovana mahomby angovo-
Miaina ny fiainana maitso
Andeha hojerentsika isaky ny safidy:
Get ny More mifaninana Vidiny ho an'ny Asa vaventy
mahagaga, ny olona maro mbola tsy mahatsapa fa raha ny utility mpanome tolotra, afaka miantsena manodidina. Raha mipetraka any Texas, Illinois, New Jersey, na Pennsylvania, ianao dia tsy voafetra ho iray Provider. Ianao handoavana ny angovo noho ny kilowatt ora (kWh).
Misy vintana tsara fa misy olona manatitra vidiny tsaratsara kokoa noho izay nahazo anao amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy, vidiny dia tsy ny hany zavatra mba handinika. Fa mba ho lehibe iray. kitiho eto Raha mila fanazavana fanampiny momba samihafa mpamatsy sy ny angovo drafitra ao amin'ny fanjakana.
Purchase Energy-Fahaizan'ny Trondro Appliances
vata fampangatsiahana, washers, ary dryers dia lehibe, miharihary kandidà ho fahombiazan'ny fanavaozana. Ny olon-drehetra mahafantatra ny fomba hery be ireo milina manararaotra. Na izany aza, ny tena meloka dia mety ho ny fitaovana kely izay mangina Voamariky isan'andro. Forbes efa izany ny momba ny raharaha:
Digital sary zana-kazo kely, ka sarotra ny mieritreritra azy ireo toy ny angovo lanin'ny kisoa ny. Fa raha samy U.S. tokantrano efa anankiray amin'ireny nihazakazaka zana-kazo manodidina ny famantaranandro, mety hitondra hery dimy zavamaniry mba mihazakazaka azy rehetra, Hoy ny Electric Power Research Institute (EPRI), ny herinaratra-mifantoka fikarohana sy ny fampandrosoana fikambanana tsy mitady tombontsoa.
Io lahatsoratra io ihany koa ny avy eo hanondro vampira angovo toy ny mpanonta sy ny fitenenana. Izy ireo antsoina hoe satria mbola minono ny hery na dia tsy amin'ny. Finday sy ny solosaina findainy lovia adapters mahafeno fepetra koa, araka izay nitsitaitaikan'i angovo, na dia tsy manan-javatra plugged ho azy ireo. Fehiny: tsy misy appliance kely loatra ny angovo fiheverana
Miaina ny maitso Lifestyle
Farany, dia tonga eo amin'ny toerana misy ireo karazana lahatsoratra hiafara foana. Na angovo fahombiazana na ny fitantanam-bola manokana, ny farany vahaolana dia ny tsy maintsy manova ny fomba fiainana ho tia fiovana maharitra.
Tsy tena manana ny maka 30 minitra ranonorana amin'ny mafana indrindra mari-pana dia afaka mijoro. Tsy voatery hanasa ny zavatra akanjo rehefa iray monja manao. Ireo angovo mpamonjy Soso-kevitra avy amin'ny U.S. governemanta dia tsara toerana mba hanombohana mahafantapantatra hoe ahoana azonao atao ny anjara.
Isika rehetra dia manana anjara milalao. Ny angovo dia tsy tena nisy zavatra manokana eo aminao sy ny hery orinasa. Izy io dia fiaraha-monina izany, toy ny angovo dia voafetra, nizara loharano. Mety indray andro mahatakatra ny fomba hahazoana angovo azo ampiasaina avy amin'ny raharaha maizina. Fa mandra-dia, tsy maintsy hitantana ny harena tao aminay ampiasaina. Izany dia niakatra ho antsika tsirairay avy amin'ny fitantanana ireo loharanon-karena amim-pitandremana.
← Izay laptop tokony hividy ho an'ny ankizy? Ahoana no hanjanaka Mars →